Loharanon-kevitra avy amin'ny The Reward Reward momba ny fitiavana, ny firaisana ary ny Internet
Ny Reward Foundation dia manome loharanom-baovao farany hanampiana anao amin'ny alàlan'ny fahavoazana mety hitranga amin'ny fijerena sary vetaveta amin'ny Internet. Amin'ity fizarana ity dia hahita zavatra mahaliana be dia be ianao. Nanomboka namolavola ny fitaovanay manokana izahay ary manolotra famerenana ireo boky, horonan-tsary momba ny siansa amin'ny pôrnôgrafia, rakipeo fisaintsainana fahatsiarovan-tena ary fikarohana vaovao maro. Manome torohevitra momba ny fahazoana miditra amin'ireo taratasy ara-tsiansa tany am-boalohany ihany koa izahay. Ny taratasy sasany dia ao ambadiky ny rindrina karama, ny sasany fidirana malalaka ary maimaimpoana.
Raha ny fihetseham-pon'ny olombelona no entin'ny fihetseham-po voalohany, dia tsy ny teknolojia. Mifototra amin'ny lojika madio izy io, natsangana miaraka amin'ny algorithmes natao manokana mba hisambotra sy hitazona ny saintsika. Ny aterineto dia fitaovam-pampana mivantana ary mety hisy fiantraikany lehibe kokoa eo amin'ny famolavolana ny soatoavina ara-kolontsaina noho ny an'ny fianakaviana. Ny fahatakarana ny vokany dia zava-dehibe amin'ny fahasalamantsika, indrindra ho an'ireo taranaka ho avy. Ho setrin'izany hevitra izany, nihaino izay tian'ny olona ho fantatra momba ny fitiavana, ny firaisana ara-nofo, ny fifandraisana ary ny pôrnôgrafia amin'ny aterineto. Hatramin'ny tapaky ny 2014 ny asantsika amin'ny tanora sy ny matihanina amin'ny sehatry ny fanabeazana ara-pananahana dia nahita ny tsy fahafaham-pon'ny mombamomba ny kalitao, ny maha-zava-dehibe ary ny fahombiazan'ny loharanom-pampianarana ankehitriny. Mampivelatra ny loharanon-karena ny TRF mba hanamafisana ny tsy fitoviana.
Ny solontena avy amin'ny The Reward Foundation dia efa niresaka tamin'ny hetsika am-bahoaka am-polony mahery nanerana an'i UK. Niresaka tamin'ny mpihaino matihanina ihany koa izahay tany Etazonia, Alemana, Kroasia ary Torkia.
Niresaka tamin'ireo antokon'olona ankizilahy sy ankizivavy izahay tany an-tsekoly, ary koa ny fiaraha-miasa miaraka amin'izy ireo amin'ny tarika madinika ary ny iray ho an'ny tsirairay. Mampiasa fomba amam-panaon'ny Human-Centered izahay mba hanangonana loharanom-pahefana azo atao.
Manana atrikasa feno iray andro aman'alina izahay ho an'ireo mpitsabo manana fahasalamana voatanisa amin'ny teboka 7 Continuing Professional Development. Ny taona manaraka dia hamoaka lesona momba ny lesona hampiasaina amin'ny sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa amin'ny fampiofanana mpampianatra hampiasa azy ireo ny The Reward Foundation.